Akụkọ - Họrọ igwe nkpuchi ị kwesịrị ịma ihe ndị na-esonụ
N'oge a, ọtụtụ mmadụ na-ahụ ahịa nke ihe nkpuchi na-echekwa, ma hụkwa ọdịmma nke mmepe n'ọdịnihu. Ahia buru ibu nke ukwuu. Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ịzụta akụrụngwa iji mepụta ndị na-emepụta ihe mkpuchi. Have nwere ohere ndị a ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ masks?
1. N’oge ugbu a, ndị ọchụnta ego na ndị enyi achụmnta ego na-ahọrọ ịbụ ndị na-emepụta ihe mkpuchi dị ka ndị mmanye iwu. Gịnị mere anyị ji kwuo ihe a? Ọ kachasị n'ihi mmetọ gburugburu ebe obibi. Ugbu a, ọtụtụ ndị na-eyi ihe nkpuchi ma ha pụọ. Fọdụ ndị ama ama na-akọ na ụlọ ọrụ nkpuchi ga-abụwanye ewu ewu. Site na akụkụ ndị dị n'elu, ọ na-atọkwa ntọala dị ukwuu maka ụlọ ọrụ nkpuchi n'ọdịnihu iji gbasaa mmepụta nke ihe nkpuchi ma zute ahịa ahịa, ndị na-emepụta ihe mkpuchi ejirila igwe dị iche iche na akụrụngwa iji sonye na mmepụta ahụ.
2. Ojiji nke igwe ihe eji eme ihe na akụrụngwa abughi nani ike izoputa oru, chekwaa oge mmeputa na ngwa ihe, kamakwa meputa mmeputa nke oma, gosiputa ogo nke ihe ndi ozo. Ọ na-eweta ọnọdụ dị iche na nrụpụta akwụkwọ maka nrụpụta ọrụ nke aka ha, yabụ ọ bụ nnukwu ọganiihu maka ndị na-emepụta ihe nkpuchi. Agbanyeghi na nkpuchi nke nkpuchi nwere ike ihu ntoputa na mmepe nke ngwa oru na ngwa ndi a, mana otutu ulo oru na esonye na ulo oru ihe eji eme ihe, oburu na ndi na-acho ihe nkpuchi choro iji merie, ha aghaghi imeziwanye asọmpi nke ụlọ ọrụ site na ịhọrọ nke kacha mma.
3. enterlọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịgba ọsọ isi obodo ga-ejedebe, na agbanyeghị na itinye ihe nkpuchi nwere ike ịbụ ezigbo nrụpụta, mana iji akụrụngwa na imepụta igwe. Mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-ebuwanye ibu, ọ bụ naanị akụrụngwa ole na ole ezughị. Bawanye ego na akụrụngwa igwe nkpuchi nwere ike ịmepụta uru karịa, na ịzụta ihe akụrụngwa na obere ego anaghị eweta oke uru, nke bara oke uru na mmepe ụlọ ọrụ.
Ugbu a, ihe na-ekpo ọkụ nke ụlọ ọrụ nkpuchi bụ na ego maka ndị ọchụnta ego nwere oke. Iji weghachite ego ahụ ngwa ngwa wee weta uru karịa onwe ha, ha ga-ahọrọ ịzụta mmepụta akụrụngwa. Ntinye akwụkwọ ntuziaka nwere ike ịchekwa ọtụtụ ego, yana arụmọrụ dịkwa oke elu. Ọganihu ngwa ngwa dị mma maka mmalite mmalite, na ndị na-emepụta ihe nkpuchi buru ibu ga-azụtakwu igwe na-amụbawanye òkè ahịa, weta uru dị elu na mmepe ka mma na ụlọ ọrụ.
abụghị kpara nkpuchi Ndinam igwe, ịwa ahụ ihu nkpuchi Ndinam igwe, sooks clamping igwe, abụghị kpara ihu nkpuchi Ndinam igwe, igwe nkpuchi ihu nkpuchi, ịwa ahụ nkpuchi Ndinam igwe,